Iwo Mabhirioni: zano revhidhiyo mutambo, steampunk uye zombie apocalypse | Linux Vakapindwa muropa
Iwo mabhiriyoni iri zano revhidhiyo mutambo uyo ungangove wakaburitswawo weLinux. Mutambo wevhidhiyo uyu wakanangana nenyaya yemashure apocalyptic panorama uye marongero emhando yepamusoro akasanganiswa, ane steampunk uye zombies, mauri uchafanirwa kudzivirira kutapukira kune dzinza rako, kuve nechokwadi chekuchengetedza kwavo, kuchengetedzeka uye kugadzira uto rakakura zvakakwana . Jokoni inoshuvira iyo inotiunzira iyo studio yeSevillian Numantian Mitambo, ivo vakagadzira ivo vemavhidhiyo mutambo Lords weXulima.
Kana iwe ukabata zvakanaka zviwanikwa zvekoloni yako (peturu, dombo, simbi uye huni, pakati pevamwe), uye uchikwanisa kuvaka zvivakwa zvese zvinodiwa uye nekuvandudza kwazvo, pamusoro pekugadzira simba rakaringana rekupa musasa wako nekusimudza dziviriro nemauto. kudzivirira yako zombie huwandu hwevanhu… Ipapo pamwe ungatiza kubva pazvisungo zveizvi zvisina kufa zvinotambudza nyika nemabhiriyoni avo achidzungaira munzvimbo dzese uye vachikwanisa kunhuwidza nekunzwa avo vavanouraya. Ivo Mabhirioni achaburitswa mwedzi uno muKutanga Kuwana, asi kuburitswa kwakazara kwakarongerwa gore rinouya, saka tinofanirwa kumirira zvishoma. Nhau dzakanaka ndedzekuti mumwe wevagadziri varo ane chekutaura kunharaunda yese yevatambi vanoshandisa Linux, uye ndizvozvo zvakavakirwa painjini imwechete nezita rayo rapfuura, Ishe weXulima, uye inowanikwa kune Linux. Iyo yekuvandudza inovimbisa kuti kunyangwe ichiri kutanga uye pasina iyo Linux vhezheni iripo, ivo vanozoedza kuburitsa vhezheni yeiyo penguin muna 2018 (panguva imwechete sevamwe kana zvishoma gare gare).
Idzi inhau hombe kwete chete nekuti ma studio ndeenyika uye zvinogara zvakanaka kuona kuti tarenda riri munyika medu rinopfachukira, asi nekuti zita anovimbisa zvakawanda. Ose marongero avanofunga uye kumisikidza uye zvese zvatakaziva parizvino nezvemutambo wevhidhiyo zvinotaridzika zvakanaka uye isu tinongofanirwa kumirira kuti kuvhurwa kwacho kupedziswe mumwedzi mishoma.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iwo Mabhirioni: zano revhidhiyo mutambo, steampunk uye zombie apocalypse
Peppermint 8 Pindura, yakagadziridzwa vhezheni yeimwe yeakareruka distros muGnu / Linux World